पोस्टपेड मोबाइलमा ‘९८५१०’ नै चाहिने किन ? – TechPana | Digging into Tech
शनिबार, माघ ४, २०७६ - 8:45 AM
काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीहरुले नेपालमा विशेष गरी दुई किसिमका बिलिङ प्रणाली अपनाएका छन्, प्रीपेड र पोस्टपेड ।
प्रिपेड बिलिङ प्रक्रिया अन्तर्गत तपाईंले कल, एसएमएस तथा डेटा प्रयोग गर्नुभएको समयमा नै बिल तयार हुन्छ र त्यस वापतको रकम तपाईँको ब्यालेन्सबाट कट्टा गरिन्छ । तर पोस्टपेड बिलिङ प्रक्रियामा भने तपाईँले प्रयोग गरेका कल, एसएमएस तथा डेटाको शूल्क बिल तयार नगरी लेखांकन गरिन्छ र महिनाको अन्त्यमा (सामान्यतया प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा) मा मात्र बिल तयार गरिन्छ ।
प्रिपेडमा जस्तै पोस्टपेडमा पनि रिचार्ज कार्डमार्फत नै रिचार्ज गर्न सकिने भए पनि कल गर्न सस्तो र थप सुविधा हुने भएकाले पछिल्लो समय पोस्टपेड सिम प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । एनसेलमा केही समय अघिसम्म ‘९८०१’ बाट पोस्टपेड नम्बर सुरु हुन्थ्यो । तर, हाल उसले प्रीपेड र पोस्ट पेडलाई एउटै बनाएको छ । प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने प्याकको आधारमा मात्रै पीप्रेड र पोस्टपेड छुट्याउने गरेकाले नम्बरमा कुनै फरक नपर्ने व्यवस्था एनसेलले गरेको छ ।
अर्कोतर्फ नेपाल टेलिकमको पोस्ट पेड नम्बर ‘९८५’ बाट सुरु हुन्छ । टेलिकमले साविकका अञ्चल अनुसार पोस्टपेड सिमलाई फरक बनाउन ‘९८५’ सँगै एउटा फरक नम्बर दिँदै आएको छ । उदाहरणका लागि टेलिकमको पोस्टपेड सिमको नम्बर काठमाडौंमा ‘९८५१’ बाट सुरुहुन्छ भने सुर्खेतमा ‘९८५८’ बाट । टेलिकमले अञ्चलअनुसार सुरुवाती नम्बर फरक पारेर पोस्टपेड सिम उपलब्ध गराउँदै आएको भएतापनि अधिकांस प्रयोगकर्ताको रोजाईमा भने ‘९८५१०’ नै पर्छ ।
‘पोस्टपेड सिम लिनुपर्दा ‘९८५१०’ बाट सुरु भएको मात्रै बौक्ने हो’, टेलिकमका प्रिपेड सिम प्रयोगकर्ता केशव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘म अहिले टेलिकमको प्रिपेड सिम प्रयोग गरिरहेको छु । पोस्टपेड प्रयोग गुर्न पर्‍यो भनेर सोच बनाएको धेरै भयो तर ९८५१० बाट सुरु हुने पोस्टपेड सिम पाएको छैन । बरु म त्यस्तो नम्बरका लागि थप रकम तिर्न पनि तयार छु ।’
वास्तवमा पोस्टपेडको मोबाइल नम्बर जतिबाट सुरु भएता पनि सेवा भने उही हो । किन अरु नबोक्ने त ? उनि हाँस्दै भन्छन्, ‘पोस्टपेड भनेको त ९८५१० बाट सुरु हुने मात्रै हो जस्तो लाग्छ ।’
राम–लक्ष्मणः जसले विकास गरे सयभन्दा बढी प्रविधि
हुन पनि हो, नेपालमै पहिलो पटक पोस्टपेड मोबाइलको सुरुवात नै यही नम्बरबाट भएको थियो । नेपाल टेलिकमले सुरुमा पोस्टपेड सेवा सुरु गर्दा ९८५१० लाई प्रयोगमा ल्यायो । ‘त्यतिबेला यो सिम ठुलाबडाले बोक्ने सिमको रुपमा लिइन्थ्यो’, टेलिकमका सह–प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्, ‘सुरुमा पोस्टपेड सिम प्रयोगका लागि ५२ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसमा २५ हजारको ह्याण्डसेट, २५ हजार डिपोजिट र दुई हजार सिमकार्डको हुन्थ्यो । यति धेरै मूल्य तिरेर सेवा लिने धेरैजसो ठूला व्यवसायी हुन्थे ।’
त्यसैले ९८५१० नम्बरबाट सुरु हुने सिमकार्डप्रती प्रयोगकर्तामा विशेष खालको छाप परेको हो । यो ठूलाबडाले बोक्ने सिम हो र आफू पनी त्यही स्तर वा भनौँ हैसियतको हुँ भन्ने देखाउन पनि प्रयोगकर्ताको पहिलो रोजाइमा ९८५१० बाट सुरु हुने सिमकार्ड नै पर्छ । ९८५१२ लिएको छ भने यसले भर्खरै पोस्टपेड चलाएको रहेछ भन्ने सन्देश जाने मानसिकताका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने सहप्रवक्ता भण्डारीको विश्लेषण छ ।
‘एउटा त स्ट्याटसको लागि पनि हो’, टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य भन्छिन्, ‘मान्छे अरुले छाडेको ९८५१० को सिम खोजी खोजी लिन आउँछन् । प्रिमियम सिमको रुपमा प्रयोगकर्ताले यसलाई हेरेका छन् । तर, यो पनि अन्य पोस्टपेड जस्तै हो । सेवाको हिसावले पोस्टपेडका अन्य नम्बर र यसमा कुनै फरक छैन ।’
रन्जन कोइराला January 18, 2020
यसरी भयो इन्टरनेटको विकास
रिचार्जमा चमत्कार योजनाका विजेतालाई एनसेलको नगद पुरस्कार
इन्टरनेटसँगै टेलिभिजन दिँदै टेलिकम, परीक्षण प्रशारण सफल
अब टेलिकमको पोष्टपेडमा आफैले आईएसडी सुविधा सुरु गर्न सकिने